Ungangenisi amanzi geosynthetics impahla
Q1: Uphi inkampani yakho ise?
A: inkampani yethu itholakala e Xi'an, Isifundazwe Shaanxi, China.
Q2: unganika isampula kithi?
A: Yebo, Singathumela amasampuli amahhala, kodwa ikhasimende Udinga ukukhokha yezimpahla.
Q3: Kuyini ukuze ubukhulu bakho ubuncane?
A: I ubuncane oda ubuningi kuyinto 5000 Imitha sikwele, kodwa kuyinto kungaxoxwa.
Q4: Kuyini imigomo yakho yokukhokha?
Q5: Kuyini ukulethwa isikhathi sakho?
A: isikhathi Production ngokuvamile kubiza izinsuku 3-5, ikhono ukukhiqiza: 5000-7000 imitha square ngosuku.
RO uhlelo ukwelashwa amanzi
Yiziphi izinhlobo imithombo yamanzi ingabe aphathe?
Reverse Osmosis kuyinto ikhambi ekahle ukwelashwa amanzi ezinhlotsheni eziningi amanzi water.tap, eyaziwa nangokuthi imithombo kamasipala, undergroundwater, okuhlanganisa amanzi brackish, kanye saltwater. Ukuhlukaniswa enkulu phakathi lezi zinhlobo ezintathu iyona Ubude ziyoncibilika ukudla okuqinile (TDS) okuqukethwe kohlobo ngalunye. Njengoba umthetho of thumb, American Health Association idinga ukuthi amanzi okuphuza ngaphansi 2,000 PPM TDS.Reverse Osmosis livame ukusetshenziswa endaweni amanzi kampompi ukunciphisa ubulukhuni, noma imfucumfucu imali emanzini kusukela e-metal amapayipi. Ngokuvamile Ubude ukudla okuqinile yahlakazeka kuyinto target yamanzi nokuhlanzwa kampompi amanzi systems.Underground amadamu amanzi ngokuvamile brackish, okusho ziqukethe lemiqulu emikhulu usawoti, kodwa hhayi ngokwanele ukuba kubhekwe amanzi anosawoti. Amanzi asemhlabathini uvame nahlanza ngemboni ezolimo, abezimboni zezimayini. Amanzi asemhlabathini nayo iyisisulu lwesayensi embonini bottling, ngoba inhlanganisela amaminerali esiyingqayizivele ngokuvamile ube ukunambitheka ekhangayo.
Salt amanzi reverse Osmosis (ngezinye izikhathi ibizwa ngokuthi kungeyona) kuyinto kokuphenduka engxubeni yamanzi anosawoti amanzi okuphuza ngamanzi. Ocean amanzi has 45,000 PPM TDS. Ukusetshenziswa enkulu kungeyona ukuza ekuhlinzekeni amanzi ezindaweni angenazo bakuthola njalo amanzi ahlanzekile.
Ingabe pretreatment kudingekile?
Kubalulekile kakhulu ukuthi amanzi okuphakelayo kube preconditioned ukuvikela ulwelwesi kusukela ungcolisa okubangela nisebancane failure.The ulwelwesi yakhiwa elinama ukungena nakwamanye amazwe elivumela ukuba amanzi idlule, kodwa uyakwala kuze kufinyelele 99% of the ukudla okuqinile yahlakazeka phezulu. I oncibilikile tibheke ukwenqaba amanzi (brine ukusakaza), lapho akhishwe liphuphe. Ukususa izinto ngaphambi kuyisihluthulelo ngokuvumela uhlelo RO senzeni lalihloselwe do.As le RO System liqhubeka ukusebenza, i-ukudla okuqinile oncibilikile okwesikhashana emanzini okuphakelayo bathambekele buthelela kanye ebusweni ulwelwesi. Uma lezi ukudla okuqinile avunyelwe wakha bagcina ukhawule ukudlula kwamanzi ngokusebenzisa ulwelwesi, okubangela ukulahleka ka throughput. (Amandla throughput we ulwelwesi sivame ukubizwa ngokuthi izinga ecucuza, futhi ulinganiswa amalitha ngamunye unyawo skwele ulwelwesi surface area ngosuku.)
Sikhona yini isidingo sokuba uthole ukuhlaziya amanzi?
A enemininingwane chemical ukuhlaziywa (LSI, SDI, noma CFI) we RO okuphakelayo amanzi kuyinto ngqangi sizibone foulants ezingaba khona. Lokhu kumele kufake yokukala ubulukhuni (calcium ne-magnesium), barium yombala, Sesithombe, ayinayo, pH, futhi chlorine. Idatha kusukela ahlukahlukene okuhlaziya amakhemikhali angasetshenziswa yi onjiniyela ukuklama uhlelo ukunquma elikhulu
ulwelwesi afanayo ezokwenza kokubili ukunciphisa nokuthambekela kwezinhliziyo esikalini futhi idiphozi kwetinhlavu kanye ukukhulisa yokutakula futhi ulinganisele yokucucuza.
Yini enquma pretreatments eqondile ukuze RO ethile?
Ngo izwi labalinye lokuthi: ukuhlaziya. Njalo umthombo wamanzi ihlukile, futhi ngeke wazi ukuthi yini amanzi yakho uze ube ke ihlaziye. Uhlaziyo amanzi, LSI, SDI, noma CFI amagugu zisetshenziswa ukunquma eqondile izidingo pretreatment okwesikhathi esithile RO System. Njengoba izindlela zokuphakelwa kwamanzi nemikhuba yazo ihluke kakhulu kusuka endaweni eyodwa kuya kwenye, ngamunye imfuneko pretreatment zizohluka.
Ingabe amanzi okuphakelayo kudingeka ukuthanjiswa yi RO?
Ion exchange indlela ethandwayo for ukuthambisa nokunciphisa lungaba amaminerali esikalini ukwakhiwa phezu ulwelwesi. Ion exchange ukuthambisa isebenzisa i-sodium ukuze esikhundleni scaleforming ion ezifana ne-calcium, magnesium, barium yombala, Sesithombe, insimbi, kanye ne-aluminium ukuba kuvimbele ukulimala izakhi ulwelwesi. Amafomu sodium nosawoti encibilikayo kakhulu, okuyinto basuke kalula yenqatshwe obuyela emuva Osmosis System wenze angasheshi yakha izikali amaminerali phezu ulwelwesi. A sodiumcycle sezingubo is kabusha nge-sodium chloride brine. I regenerant wachitha, kanye sezingubo hashaza amanzi, kumele akhishwe liphuphe. Kungenxa yokuthi lokhu ukuthi exchange ion Kunconywa izinhlelo zokusebenza ukuthi une okuqukethwe lensimbi high emanzini ngayo.
Ingabe umjovo acid adingekayo?
Njengoba izixazululo esidi akuzona kuhle ulwelwesi, izixazululo caustic adala umonakalo ngokulinganayo ulwelwesi izakhi. Acid umjovo angase lithathwa RO pretreatment uhlelo ukulawula pH ukunciphisa ukuthambekela isikali-ukudalwa amanzi okuphakelayo. umjovo Acid kuboniswa uma esikalini ukwakha nokuthambekela kwezinhliziyo ukusakaza brine ingaphezu +0,3 njengoba kulinganiswe LSI. Kuphakathi sulfuric noma hydrochloric acid ingasetshenziswa le njongo.
Yini i antiscalant ukuyenza?
Antiscalants ukubonisiwe zisebenzile nokwelula ngezikhawu phakathi cleanings amakhemikhali RO ulwelwesi. Le mikhiqizo ngokuvamile washayelwa ukuthi zihlanganisa phosphate wezinto ezingaphili, ama organophosphates, futhi dispersants. Ezinye Antiscalant aqukethe polymers omubi icala futhi dispersants ezingaba ukuxubana polymers cationic engase dosed phezulu ekusakazweni ngaphambi izihlungi abezindaba. I Antiscalant kufanele kube iyahambisana nalezi polymers; uma kungenjalo, umkhiqizo uzosabela Foul ulwelwesi.
Ingabe zonke izinhlelo zidinga chemical yokuhlanza?
Naphezu kwayo yonke imizamo ukuvikela ohlelweni kusuka ungcolisa futhi ulahlekelwe ecucuza, ekugcineni nolwelwesi kuzodinga chemical yokuhlanza. A welldesigned RO uhlelo izobandakanya umphako yokuhlanza skid ukwenza lula inqubo yokuhlanza. I skid kuzomele sifake ithangi zamakhemikhali, isixazululo heater, recirculating futha, endle, amapayipi amanzi, kanye nazo zonke ezinye uxhumano kanye nokufakwa edingekayo ukuze ngifeze ephelele chemical yokuhlanza we amamojuli RO.